के हो नेपालको संकट ?
भुवन कठायत, आजको दिनमा नेपाल ठूलो राजनिती संकटमा आइपुगेको छ । जनता सत्ता र राजनीतिक दलहरुसँग चरम असन्तुष्ट भएका छन् । दलहरूले आफुमाथि ठगी र ठूलो राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, यो सब कसरी भयो त हामी यो कुरा समयमै बुझ्न किन र कसरी चुक्यौं ?
इतिहास नबुझिकन बर्तमन बुझ्न सकिदैन र भविष्यको सहि यात्रा पनि तय गर्न सकिदैन। संसारमा अहिले ब्यापार युद्ध चलिरहेको छ। बिगतका बिनासकारि पहिलो र दोस्रो बिश्वयुद्ध पनि खासगरि ब्यापार रणनीति कै उद्देश्यले गराइएका थिए ।
अब नेपालको समस्या के हो त भन्ने तर्फ जादाँ कुनै पनि देशमा आन्तरिक असन्तुलन र अस्थिरता हुन्छ भने त्यहाँ बिदेशी शक्तिहरुले खेल्ने राम्रो मौका पाउँछन्। यो कुरा बिश्वब्यापी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कुटनिति हो ।
जब देशभित्र अराजकता र असन्तुलन सृजना हुन्छ तब त्यहाँ खास गरि बिदेशि ब्यापारी हरुले केहि सिमित ब्यक्तिहरुलाई किन्ने र आफ्नो लुट धन्दा मच्चाएर त्यहाको अर्थतन्त्र सखाप नै पार्ने गर्दछन् । यी बिदेशि र ब्यापारी भन्नाले ती देशको राजनितीबाट संरक्षित र कुटनितिक संयन्त्रबाट परिचालित उद्योगपतिहरु हुन।
जस्तो एउटा जल्दोबल्दो उदाहण हो एनसेल कम्पनी। र, पर्दामा नआएका यस्ता अरु सयौं हजारौं धन्दा छन् नेपालमा । र, त्यहाँ आफ्नो फाइदा अनुकूल को ब्यवस्था राखिरहन आफुले किनेका ब्यक्तिहरुलाई सत्तामा राखि त्यहाँ सधैं खेलिरहन्छन्। जसको सिकार नेपाल पनि भयो । र, त्यसैको प्रत्यक्ष परिणाम आज हामी नेपालीले भोगिरहेका छौं।
जनताहरुलाई कसरी मिलाएर जाने र माहोल कसरी धमिलोमा राखिरहने सबै योजना र नीति निर्देशन उनीहरूले नै तय गर्दछन् । अनि आफ्नो लागि काम गर्ने केही ब्यक्तिहरु जनताको नजरमा हिरो बनाएर सत्तामा राखेर आफ्नो ब्यापार रणनीति अगाडि बढाइ रहन्छन् ।
नेपाल र नेपालको भु राजनीतिलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्ष र ब्यापार युद्धका लागि प्रयोग गर्न, आफ्नो साम्प्रदायिक संघर्षको लागि प्रयोग गर्न पश्चिमा शक्तिहरु सदिऔं देखि लागि परिरहेका छन् ।
बिश्वकै सबैभन्दा ठुलो बजार एसिया हो । विश्वको सबैभन्दा ठुलो भुगोल, सर्बाधिक जनसंख्या र ठुलो पुजी रहेको एसियालाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो कब्जामा लिने भन्ने नै पश्चिमाहरुको रणनीति हो । उनीहरु एसियाको पुजिवादलाई सखाप नगरि आफ्नो भलो नरहने निश्कर्षमा यो खेल खेलिरहेका छन् ।
जसको रणनीतिको एउटा अंश नेपाल पनि बन्न पुग्यो। इतिहास साक्षी छ, धेरै पछाडि पनि होइन हामीले २०४७ सालको बहुदलीय ब्यवस्थाको आगमन देखि आज सम्मको घटनाक्रम मात्रै पनि केलाएर हेर्यौ भने सबै कुरा स्पस्ट हुन्छ ।